ကိုဗစ်ကူး စက်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးတွေ့ရှိပါက တက်နေသောကျောင်းကိုသာ ယာယီပိတ်မည်
[Zawgyi] ကိုဗစ်ကူး စက်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးတွေ့ရှိပါက တက်နေသောကျောင်းကိုသာ ယာယီပိတ်မည် စာသင်ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ဦးတွေ့ရှိပါက ၎င်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်း ကပြောကြားသည်။အခြေခံပညာကျောင်းများကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အထက်တန်းအဆင့်မှစတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အတန်းများကို အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားသည်။ “ဟုတ်တယ်။တွေ့တဲ့ကျောင်းကိုဘဲပိတ်မှာ။ ပိတ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး Safe ဖြစ်တဲ့အချိန်မှ ပြန်ဖွင့်ရမှာ။ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတွေကိုတော့ အိမ်မှာဘဲနေခိုင်းပြီး Home Learning ဘဲလုပ်ခိုင်းရမှာဘဲ”ဟု ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုသည်။အခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ ၊ ဆရာမများ လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် အဝတ်ဖြင့်ချုပ်ထားသည့် နှာခေါင်းစည်း၊ မျက်နှာဖုံးများကို အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လက်ဆေးခြင်းများ …
[Zawgyi] ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူများ အတွ က် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်)ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ 30-5-2020ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများသိရှိစေရန် (2020-ဥပဒေသစ်)ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က) ။ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ #အခြားနံပါတ်တပ် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်=ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း.ထောင် တစ်လ။ #မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း .ထောင် တစ်လ ။ #တခြားသူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ ။ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း . ထောင် တစ်လ။ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-င)၊ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း.ထောင်တစ်လ ။ #မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက်မူးလွန်းမောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ …
ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်နဲ့တူတယ်
[Zawgyi] ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်နဲ့တူတယ် ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာမပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင် နဲ့တူတယ်။ကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီး မျှော်လင့်နေရုံပဲ။အမြင့်ဆိုတာ သူမအတွက် အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ…အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ဖက်တွယ်မက်မောနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ အခန်းကျဉ်းလေး ထဲက မီးလုံးလေး တစ်ခုနဲ့တူတယ်။ ဖွင့်ခြင်း ပိတ်ခြင်း ခံနေရ တဲ့ သူ့အလင်းဟာကန့်သတ်နယ်မြေ တစ်ခုနဲ့တကယ်တော့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ အများနည်းတူ တောင်ပံဖြန့် ပျံသန်းနိုင်ရမယ်။ဘဝဆိုတာ မျှော်လင့် အိပ်မက်နေရုံနဲ့ တင်းတိမ် မနေသင့်ဘူး။မိသားစုအတွက် လွယ်အိတ်လို လူမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ နေမင်းလို ကိုယ်ပိုင်အလင်းလဲ ရှိသင့်တယ် နေ့အခါလုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ကြဲဖြန့်ရင်းညခင်းမှာလမင်းအတွက်လည်း …
ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုယူလို့အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာနံပတ် (2) နေရာကိုရယူထားတဲ့ဝမ်ဘစ်ဆာကာ
[Zawgyi] ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုယူလို့အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာနံပတ် (2) နေရာကိုရယူထားတဲ့ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ညာနောက်ခံလူ ဝမ်ဘစ်ဆာကာသည်ပြီးခဲ့သည့်ဘောလုံးရာ သီကတည်းက ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းတွင်ခြေစွမ်းပြက စားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ယခုအချိန်တွင်ဘာလုံးလုယူရာတွင်အောင်မြင်မှုရသည့်နေရာ၌ လက်စတာနောက်ခံလူ ရီကာဒိုပါရဲယားနောက် ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်းမှု ဝမ်ဘစ်ဆာကာသည်မနှစ်ကခြေစွမ်းကဲ့သို့ ဘောလုံးလုယူရာတွင်အောင်မြင်သည့်အပိုင်း၌ ဒုတိယနေရာ တွင်သာဆက်လက်ရပ်တည်နေခဲ့သည်။ ယခုအခါဝမ်ဘစ် ဆာကာနည်းတူ ဝုဗ်နောက်ခံလူ ဂျိုနီ၊ အဲဗာတန်မှစီဒီဘီတုိ့ သည်လည်း ဘောလုံးလုယူရာ၌အောင်မြင်သည့်စာရင်းတွင် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေကြသည်။ ယခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးရာသီတွင် ဘောလုံးလုယူရာ၌အောင်မြင်သည့်စာရင်းတွင် လက်စတာနောက်ခံလူ ရီကာဒိုပါရဲယားက (68) ကြိမ်ဖြင့်ပထမဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ညာနောက်ခံလူ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ က(66) ကြိမ်ဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေခဲ့သည်။တတိယနေရာတွင်စပါးအသင်းမှ အော်ရီရာ(58) ကြိမ်၊ ဝုဗ်မှ ဂျိုနီ(45) ကြိမ်၊ အဲဗာတန်မှစီဒီဘီက (43)ကြိမ်ဖြင့်အသီးသီး ရပ်တည်နေကြသည်။ [Unicode] ပရီးမီးယားလိဂျဘောလုယူလို့အောငျမွငျတဲ့နရောမှာနံပတျ (2) နရောကိုရယူထားတဲ့ဝမျဘဈဆာကာ ညာနောကျခံလူ ဝမျဘဈဆာကာသညျပွီးခဲ့သညျ့ဘောလုံးရာ သီကတညျးက …
[Zawgyi] သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့ (သို့မဟုတ်) သေကံမပါသေးသော … ည စာဖတ်သူတို့အတွက် စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပီနော် သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့ (သို့မဟုတ်)သေကံမပါသေးသော ည…အိမ်ကိုညနေခြောက်နာရီခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက်တော့ အမျိုးသားက ညစာစားဖို့ ဟင်းနွှေး ဘာညာ သူပြင်လိုက်မယ်ဆိုပီး အောက်ထပ်မှာ ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။ကျမတို့ အိမ်က အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ် အတော်လေးအော်ပြောမှ ကြားနိုင်တာပါ….သမီးလေးနဲ့ ကျမ အိမ်အပေါ်တက်လာခဲ့ပီး ကျမလုပ်စရာလေးရှိလို့ သမီးလေးကို တီဗီ ဖွင့်ပေးပီး….လုပ်စရာရှိတာလေးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သမီးလေးကတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဆော့ရင်းကစားရင်း သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သီချင်းလေးတွေလာရင် တီဗီငေးရင်းပေါ့….သမီး​လေးက အိပ်​ရင်​ ဟို​ကျော်​ဒီခွအိပ်​တတ်​လို့ ကုတင်​ကိုဖြုတ်​ပီး သံမံတလင်းမှာ ဖ​ယောင်းပုဆိုးခင်းပီး မွေ့ယာခင်းပီး ကျမတို့ အိပ်​ကြပါတယ်​။အိပ်​ယာတစ်​​နေရာထဲ အခင်းရှိပါတယ်​…ကျန်​တဲ့အ​ပေါ်ထပ်​တစ်​ထပ်​လုံး ဖ​ယောင်းပုဆိုးခင်းထားတာပါ….ကျမတို့အိပ်​ယာရဲ့ ​ခေါင်းရင်းမှာ မီးပလပ်​​ပေါက်​ရှိပါတယ်​…အဲ့မီးပလပ်​​ပေါက်​က​နေ ဘုတ်​ခုံ(extension)ကြိူး​ခွေချပီး အမျိုးသားရဲ့ …
အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး ၄၀၀၀၀ ကျပ် ကို ရသင့်ရထိုက်တဲ့ သူများအား အစိုးရထုတ်ပြန်
[Zawgyi] အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး ၄၀၀၀၀ ကျပ် ကို ရသင့်ရထိုက်တဲ့ သူများအား အစိုးရထုတ်ပြန် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေဟာလည်း ၁သန်းကျော်သွားခဲ့ပါပြီး…WHO က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ Lock Down ချထားပြီး အလုပ်အကိုင်းအများစုလည်း အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ပိတ်သိမ်ထားရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အစိုးရက ဥပဒေအသစ်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြင့် ကာကွယ်ရေးတွေပြုလုပ်ပေးနေတာပါ…ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကိုကပ်ဘေးကြီးပါပဲ။အခုလိုကပ်ရောဂါအချိန်ကြီးမှာ အစိုးရကလည်း လက်လုပ်လက်စားပြည်သူတွေအတွက် မကြာသေးမီက ဆီ၊ဆန်၊ကြက်သွန်၊ပဲ စသည့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ်ချက်တွေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး….အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူပြည်သားအများအတွက် ငွေကျပ် ၄၀၀၀၀ …
ဒီလိုရိုးသားတဲ့ သူတွေရှိနေသေးတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ
[Zawgyi] ဒီလိုရိုးသားတဲ့ သူတွေရှိနေသေးတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ “ရိုးသားမှုတွေရှိနေခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိခြင်း”မနေ့ ကနံက်စောစော (၇)နာရီလောက်..ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာသည်။ ကျွန်တော့အကိုကြီးထံမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြည့်နှင့်ဆက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ 8 Mile Hotel မှ ဆည်မြောင်းလမ်းရှိ Lucky Seven လ္ဘက်ရည် ဆိုင်ထိ ကျပ် ၁၅၀၀နဲ့ Taxi ငှားပြီးနံက်စာလာစားကြ၏။ပိုက်ဆံ ရှင်းတော့မှ ၄င်းတို.၏ပိုက်ဆံအိတ်မတွေ့ ၍စဉ်းစားကြည့်တော့ခုန City Taxi ပေါ်မှာမေ့ကျန်ခဲ့လေပြီ။ Walletထဲတွင် $ 700 နှင့်ကျပ်၁သိန်းကျော်ပါသွားပြီး ငွေထက် အရေးကြီးသည့်ID Cardsများပါသွားသဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်ရ နိုင်မလဲစဉ်းစားကြသည်။ ” ရေအဆုံးကုန်းတစ်ဝက်ပေါ့” Grab Taxi ဆိုရင် နောက်ကြောင်းလိုက်လို့ ရနိုင်သေးသည်။ သူတို့ တွေလည်း ၁၁ နာရီလေယာဉ်နဲ့ US …
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၊ နို့တိုက် မိခင် နဲ့ အသက် ၈၅ နှစ် အထက်များကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးမည်
[Zawgyi] ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၊ နို့တိုက် မိခင် နဲ့ အသက် ၈၅ နှစ် အထက်များကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးမည် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ အသက် ၈၅ နှစ်အထက် အဖိုးအဖွားတွေကို ကျပ်သုံးသောင်းထောက်ပံ့မယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဒေါ် စန်းစန်းအေးက ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို ငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်အစီအစဉ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ(LIFT) အဖွဲ့နဲ့ မိတ်ဖက်အလှူရှင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဥရောပသမဂ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါစတဲ့ နိုင်ငံတွေက ကန်ဒေါ်လာ ကိုးသန်းထောက်ပံ့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် တွေ၊ နို့တိုက်မိခင် နှစ်သိန်းလေးသောင်းကျော်အတွက် ကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းနီးပါးနဲ့ အသက် ၈၅ နှစ်အထက် အဖိုးအဖွား ၂သိန်းကျော်အတွက်ကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေကို …
[Zawgyi] သမီးလေးရဲ့ အသက် (၁၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှာကြားခဲ့တဲ့ စကား (၃) ခွန်းနဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင် သမီး ဖူးဖူး။ ဒီနေ့ဟာ သမီးအသက် (၁၃)နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့လေးနော်။ Happy Birthday ပါ သမီးရယ်။သမီးကို ဖေဖေ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း မွေးနေ့လက်ဆောင် စကားတွေ ရေးခဲ့တာလည်း ဒီနှစ်နဲ့ဆို သုံးနှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ သမီး။ ဒီနှစ်တော့ ဖေဖေတို့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် မှာကြားခဲ့တဲ့စကား သုံးခွန်းကို ဖေဖေက သမီးလေးကို ထပ်မှာပါရစေ။ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ် ပြင်ရွာမှာ မွေးတဲ့သမီးဖိုးဖိုးရဲ့ အမေဒေါ်ကြင်ငွေက သမီးရဲ့ဖိုးဖိုး ဦးယုံရှိန် တိုင်းပညာရေးမှူး ဖြစ်တော့ ဒီစကားသုံးခွန်းကို မှာခဲ့တယ်။ဖိုးဖိုးဟာ ဒီစကားအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာခဲ့တယ်။ …
အီဂါလိုဟာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ထိုက်တန်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်း နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူး Moses Simonပြောကြား
[Zawgyi] အီဂါလိုဟာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ထိုက်တန်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်း နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူး Moses Simonပြောကြား ပြင်သစ်ကလပ်နန့်စ်အသင်းတွင်ကစားနေသည့်အသက်(24) နှစ်အရွယ်နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူး Moses Simon က ယင်း၏နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းဖော်အီဂါလိုသည်ယူနိုက်တက်အသင်းကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အပြည့်အဝ ထိုက်တန်မှုရှိကြောင်းသိရသည်။ ယူနိုက်တက်အသင်း ကလက်ကျန်ပွဲစဉ်အတွက် အီဂါလိုကိုအပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့ထက် အငှါးစာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်သာစီစဉ်နေသည်။ Moses Simon က” အကယ်၍ ယူနိုက်တက်အသင်းက အီဂါလိုကိုအငှါးသက်သက်ပဲခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘဲအပြီးသတ် ပါခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ဘောလုံးလောကအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသလိုနောက်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့နိုင်ဂျီးရီး ယား နိုင်ငံအတွက်ကိုပါအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။ အီဂါလို ဟာသူကစားပေးခဲ့တဲ့ပွဲအနည်းငယ်မှာပဲသူဟာယူနိုက်တက် အသင်းအတွက်ကစားပေးဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးဖြစ်တဲ့အီဂါလိုက Old Trafford ကွင်းမှာအောင်မြင်မှုရတာကိုမြင်ရရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲဗျ။ သူက အခွင့်အရေးရတာနဲ့သူ့ရဲ့အရည်အသွေးကိုပြသဖို့ပဲအမြဲအာရုံလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ်” ဟုပြောဆိုသွားခဲ့သည်။အီဂါလိုသည်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ သည့်(8) ပွဲတွင် (လူစားဝင်ကစားသည့်ပွဲအပါအဝင်) (4) ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး (1) ဂိုးဖန်တီးပေးထားသည်။ [Unicode] …
Total views : 2453758